Bidixda: Maxamed Muse, Muxyadiin Darbaweyne, L. Johansson, Yusuf Maxamuud Kulmiye "Dhabarey" iyo dhexda Sacad Cumar Geedi
Guddoomiyaha UEFA oo la kulmay Soomaalida
Stockholm - Guddoomiyaha xiriirka Kubbada Cagta ee Yurub (UEFA), isla markaana ah guddoomiye ku-xigeenka xiriirka Kubbada Cagta ee dunida (FIFA) Mr Lennart.Johansson ayaa maalintii jimcaha 06 Sep, kulan dheer la yeeshay qaar ka mida madaxda guddiyada ciyaaraha ee Soomaaliya.
Mr.Lennart.Johansson, guddoomiyaha UEFA, wuxuu xafiiskiisa ku yaal xarunta dalka Sweden, Stockholm uu ku qaabilay Guddoomiye ku-xigeenka xiriirka Kubbada Cagta ee Soomaaliyeed, Muxyadiin Darbaweyne, Wakiilka Olympic Soomaaliyeed ee dalalka waqooyiga iyo bartamaha Yurub Sacad Cumar Gedi, Guddoomiyaha guddiga Olympic Soomaaliyeed ee Sweden Maxamed Muse Cabdi iyo ku-xigeenkiisa Yusuf Maxamuud Kulmiye "Dhabarey".
Kulankaan oo socdey muddo dheer waxaa looga wadahadlay arrimo badan oo ku saabsan sidii loo horumarin lahaa guud ahaan ciyaaraha Soomaalida siiba Kubbada Cagta. Waxaa la isla soo qaaday oo kale sidii Soomaaliya looga taageeri lahaa dayactirka garoomada ciyaaraha iyo sidii qalabka ciyaaraha loogu diri lahaa.
Waxaa muhiim loo arkay in loo baahan yahay khubaro tababaro siisa ciyaartooyada Soomaalida ee gudaha iyo dibadaba.
Waxaa kale oo looga wada hadley sidii dhallinyarada Soomaaliyeed ee ku nool Yurub siiba kuwa dalka Sweden sare loogu qaadi lahaa farsamadooda ciyaareed, iyo waliba sidii ay uga faa'iideysan lahaayeen khibrada kooxaha kubbada cagta ee ka dhisan Yurub.
Fadhigaas waxaa warbixin dheer ka soo jeediyey guddoomiye ku-xigeenka kubbada cagta ee Soomaaliya, Muxyadiin Darbaweyne, wuxuuna ka hadlay xaaladda ciyaaraha iyo horumarka uu sameeyey Xiriirka kubbada Cagta.ee Soomaaliya.
Sidoo kale Wakiilka Olympic Soomaaliyeed ee dalalka waqooyiga iyo bartamaha Yurub, Sacad Cumar Gedi, ayaa ka sheekeeyey waxqabadkii kooxaha ciyaartooyada Soomaaliyeed ee Yurub.
Guddoomiyaha guddiga Olympic Soomaaliyeed ee Sweden Maxamed Muse Cabdi, ayaa isna warbixin kooban ka soo jeediyey qaabka loo dhisey ururka iyo baahida keentey in ururkaan la dhiso.
Yusuf Maxamuud Kulmiye "Dhabarey" oo ah guddoomiye ku xigeenka guddiga Olympic Soomaaliyeed ee dalka Sweden ayaa ka warramay hawlaha ballaaran ee horyaal ururka iyo wax ka qabashadooda.
Waxaa gebagebadii shirkaasi ka hadley Gudomiyaha UEFA wuxuuna balanqaadey in uu waxkasta oo karaankiisa ah uu u qabandoona sidii loo horumarin lahaa ciyaaraha Soomaalida, gacan buuxdana uu ka geesan doono, tixgelin gaar ahna uu siin doono sidii sare loogu soo qaadi lahaa farsamada ciyaareed ee dhallinyarada ku nool Sweden iyo Soomaaliya.
Mr Lennart.Johansson oo u dhashay dalka Sweden ayaa loo doortay madaxeynaha ama guddoomiyaha UEFA 1990.
WQ. Siyaad adan Muse